आइफोन एट, एट प्लस र आइफोन टेन सार्वजनिक, के के छ त फिचर ! – Kaski News
आइफोन एट, एट प्लस र आइफोन टेन सार्वजनिक, के के छ त फिचर !
२८ भाद्र २०७४, बुधबार मा प्रकाशित
एप्पलले आइफोन एट र आइफोन एट प्लससँगै आइफोन एक्स पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसलाई आइफोन टेन भनिन्छ । आइफोन टेनमा फेस आइडी राखिएको छ । फोनको अगाडिको क्यामेराले प्रयोगकर्ताको फेस स्क्यान गरी फेस आइडी तयार गर्दछ ।
५ दशमलव ८ इञ्चको ओएलइडी डिस्प्ले भएको आइफोन टेनको डिस्प्लेलाई सुपर रेटिना डिस्प्ले भनिन्छ। यसले एचडिआरसमेत सपोर्ट गर्छ। यसको सुरुवाती मूल्य ९९९ अमेरिकी डलर रहेको छ। नोभेम्बर ३ तारिखदेखि यो बजारमा आउनेछ। एप्पलले आफ्नो फोन सार्वजनिक गरेको १० वर्ष पुगेको अवसरमा आइफोन टेन निकालेको हो ।
आइफोन एट र आइफान एट प्लस
नयाँ आइफोनको स्क्रिन ५ दशमलव ८ इन्चको रहने र डिस्प्ले रिजोलुसन २४३६ गुणा ११२५ रहेको छ । नयाँ आइफोनको डिस्प्ले ओलिडमा स्वीच रहेको छ । अहिले आइफोनको डिस्प्ले एलसिडी छ ।
नयाँ आइफोनको बडी ग्लास र स्टिनलेस स्टिल छ । यसअघि युनिबडी आल्मुनियम डिजाइन रहेकोमा अब आइफोन एट र एट प्लसको फ्रेम स्टिनलेस स्टिल र पछाडिपट्टी कडा ग्लास रहेको छ ।
आइफोन एटमा वायरलेस चार्जर रहेको छ । जसमा लामो दूरीबाट पनि वायरलेस चार्जरबाट चार्ज गर्न सकिने छ ।
नयाँ आइफोनमा आइकोनिक होम बटन छैन । होम बटन नभए पनि होम स्क्रिनमा फर्किन वा होम स्क्रिन ओपन गर्न सकिने छ । त्यसका लागि न्यु जेस्चरले होम बटनलाई रिप्लेस गर्ने ब्लुमबर्गले उल्लेख गरेको छ ।
होम बटन नभएसँगै टच आइडी पनि छैन । यसको अर्थ नयाँ आइफोनमा फिङगरप्रिन्ट सेन्टर हराएको छ । तर नयाँ आइफोनको पावर बटनमा फिङगर सेन्सर रहेको छ ।
थ्रि डी फेस रिकग्नाइजेसन पनि छ । त्यसका लागि नयाँ आइरिस स्क्यानर वा सेल्फी क्यामरालाई परिस्कृत गरिएको छ
आइफोन एट सिरिज नयाँ कलरमा पनि आएको छ । नयाँ आइफोन कप्पर गोल्ड कलरमा पनि छ ।
नयाँ आइफोनको रेयर क्यामरामा सुधार गरिएको छ । यसमा कम प्रकाशमा पनि राम्रो फोटो खिच्न सकिने वा मेगापिक्सल बढी हुनेछ ।
नयाँ आइफोनको मूल्य बढी हुनेभएको छ । नयाँ आइफोन ६४ जिबी, २५६ जिबी र ५१२ जिबी स्टोरेज क्षमतामा उपलब्ध छ । ६४ जिबी स्टोरेज भएको आइफोनको मूल्य ९९९ अमेरिकी डलर, २५६ जिबी स्टोरेज भएकोको मूल्य एक हजार ९९ अमेरिकी डलर तथा ५१२ जिबी स्टोरेज क्षमताको ११ सय ९९ अमेरिकी डलर हरने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै आइपी रेटेड वाटर तथा डस्ट रेसिस्ट्यान्स, आइओएस इलाभेन र तीब्र गतिको एक इलाभेन प्रोसेसर रहेको छ ।